Soo qaado daqiiqadaha ugu fiican oo ku qaabee sawirradaada daabacan | Abuurista khadka tooska ah
Soo qaad daqiiqadaha ugu fiican oo ku qaabee sawirradaada daabacan
Qaadashada sawirradu waa wax qof kastaa sameeyo maalinta oo dhan. Xaqiiqda ah in taleefannadu ay leeyihiin kamarad ayaa kuu oggolaanaya inaad haysato qalab aad ku noolaan karto daqiiqadaha maalinlaha ah. Iyo inkasta oo Kuma qaadanayno waraaqaha dhammaan sawirada aan ka qaadno sawirrada, haa waa run taas sawirro daabacan weli waa wax la qabanayo, inkasta oo aan dib ugu celinay in yar oo xul ah.
Laakiin, maxaad maskaxda ku haysaa inaad sawirro daabacdo? Sidey tahay inay ahaadaan? Siyaabo noocee ah ayaa jira oo loo daabici karaa? Waxaan kaala hadli doonnaa waxaas oo dhan iyo inbadan oo ka hooseeya.
1 Sida loogu qabsado daqiiqadaha ugu fiican sida ugu macquulsan
1.2 Raadi taageero
1.3 Ka taxaddar zoomka
1.4 Iftiinka, sifiican oo dabiici ah
1.5 Qaado sawirro badan
2 Farshaxanka dib u hagaajinta sawiradaada kahor daabacaadda
3 Daabacaadda sawirrada: sida iyo meesha loo sameeyo
Sida loogu qabsado daqiiqadaha ugu fiican sida ugu macquulsan
Kahor daabacaadda sawirrada waxaad u baahan tahay inaad qaadatid, sax? Hadana badanaa, taasi macquul maahan maxaa yeelay sawirada aad qaadatay si fiican uma noqon. Markay tahay wax la soo celin karo, waxba ma dhacaan, laakiin ka waran haddii aad dhimatay daqiiqad gaar ah oo markii aad aragto sida sawirku u noqday, aad ogaato inay khalad tahay?
Fuli taxane ah talooyin ku saabsan qaadashada sawirro wanaagsan Waa waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad tixgeliso, gaar ahaan haddii aad rabto inaad goor dambe daabacdo. Waxaa ka mid ah, kuwa aan inta badan kugula talinayno:
Aad ayey muhiim u tahay inaadan isku dayin inaad sawir ku deg degto maxaa yeelay markaa ma qabsan doontid nuxurka dhabta ah ee xilligan. Mararka qaar, haysashada booskaaga si aad uhesho waqtiga ugu fiican waa wax walba.
Tusaale ahaan, marka laga hadlayo xayawaanka rabaayadda ah, waxay u muuqdaan inay dhaqaaqayaan wax badan laakiin waxaa jira waqtiyo markii, ilbidhiqsiyo, ay kuugu deeqayaan sawirka riyada. Hadaad diyaar garowdana waad heli kartaa.
Marka ay tahay inaad sawir wanaagsan qabato, waxa ugu xun ee kugu dhici karaa waa inuu ku soo baxo jahwareer, qallooc, iwm. Haa? Waa hagaag, kiiskan waxaa lagu xalliyaa iyadoo la raadinayo taageero sidaas darteed ha dhaqaajin garaaca wadnahaaga ama in aad sawirka sii dheeraato.
Sidaas ayaad ku qaadi kartaa sawirro adiga oo aan gariirin gacan caadi ah.
Ka taxaddar zoomka
Dad badan ayaa adeegsada dhaweyd maxaa yeelay iyagoo fiirinaya waxyaabaha dhow, waxay sifiican u qabsan karaan xilligan. Laakiin waa waxa ugu xun ee aad sameyn karto. Waana taas Soo dhaweynta, waxaad kaliya waayi doontaa tayada oo waxaad ka dhigi doontaa muuqaalka mid madow, pixelated oo aan ku habbooneyn daabacaadda.
Xalku waa inaad sawir caadi ah qaadatid, ka dibna markaad tafatirto, iskuday in zoom aad raadineysay. Haa, waxay noqon doontaa shaqo badan, laakiin way u qalantaa inaadan lumin sawirka aad rabto.
Iftiinka, sifiican oo dabiici ah
Kuwo badan ayaa tooshka uga taga markasta oo ay sawir qaadaan laakiin runta ayaa ah in isticmaalka tooshku ay sawirrada ka dhigayso mid aan dabiici ahayn. Way fiicantahay inaad naftaada udhigto boos wanaagsan, halkaasoo ka-soo-horjeedka ama laydhadhka dambe ayan samaynayn tooda oo ku sharadaynin iftiinka dabiiciga ah.
Maskaxda ku hay in tooshka aad ku heli doonto oo keliya inaad sameyso a toosh iftiin ah oo beddeli kara midabada.
Qaado sawirro badan
Ma xasuusataa markii sawir qaadayaashu kaa codsadaan inaad sawirto oo aad maqasho inuusan isagu qaadin hal sawir oo keliya laakiin dhowr ka mid ah? Waxay u sameeyaan si loo hubiyo in mid ka mid ah kuwa ay qaadaan uu noqon doono sawir fiican. Waana taas sababta aad adigu u sameysid si la mid ah.
Xaqiiqdii, waxaan ku talinaynaa taas ka samee meelo kala duwan iyo xulashooyin kala duwan Sababtoo ah, markaad dib u eegis ku sameyso iyaga gadaal, waxaad awoodi doontaa inaad aragto midka ugu fiican dhammaan oo aad doorato midkaas si aad ugu hesho warqad.
Farshaxanka dib u hagaajinta sawiradaada kahor daabacaadda
Hadda oo aad samaysay sawiradii, miyaad u malaynaysaa inay tahay waqtigii la daabici lahaa? Qaar badan ayaa ka booda talaabadan, runtiina waa waxa ugu xun ee aad sameyn karto. Markaad sawir qaadatid, mararka qaarkood waxaa jira xoogaa cilladaha ah, si ka duwan, midab, ama shay qaarkood oo ka muuqda, taasoo ku dambaynaysa inay dhammaan muuqaal ahaan u ekaadaan kuwo fool xun. Marka maxaad u isticmaali weyday barnaamijyada tafatirka sawirrada?
Tallaabada xigta ee xirfadle sawir qaade ah waa inuu la shaqeeyo sawirrada uu qaado si uu isugu dayo inuu u horumariyo. Waana waxa ay tahay inaad sidoo kale sameyso. Sababtoo ah Iyaga waxaad kuheli kartaa isku dheelitirnaanta sawirka, inuusan usoo bixin qallooc, in qaabeynta la hagaajiyo, la hagaajiyo midabada ...
Dabcan, waa inaad aad uga taxaddartaa inaadan dhaafin, gaar ahaan maadaama aad ka gudbi karto haysashada sawir kuu dhow oo qumman illaa mid lumiya dabiici ahaanta iyo xaqiiqda. Sidaa darteed, waa inaad maanka ku heysaa meel dhexe, dheelitir u dhexeeya "kaamilnimada" iyo "dabiicadda."
Intaas waxaa sii dheer, iyada oo loo marayo barnaamijyada iyo barnaamijyada aad ku ciyaari kartid miirayaasha, ku darid shucuur ama waxyaabo la mid ah, dhig muraayadaha, qoraallada, iwm. taasi waxay had iyo jeer noqon doontaa mid lagu daro si loo wanaajiyo sawirka, illaa inta aadan culeys badan saarin.
Daabacaadda sawirrada: sida iyo meesha loo sameeyo
Tallaabada ugu dambeysa ee aan ka tagnay waa markay tahay daabacaadda sawirrada. Markii hore, waxaa jiray dukaamo badan oo aad ku horumarin kartid filimka filimka iyo xitaa, markay sameynayaan, haddii sawirku fiicnaado, waxay kaala hadlayaan sida loo hagaajiyo, sida ay ula dhaceen, iwm. Laakiin hadda baqaarradan aad ayay u yaryihiin maxaa yeelay intooda badani waxay isticmaalaan kaamirooyinka dijitaalka ah iyo, wixii ka sarreeya, taleefannada gacanta.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xulashooyin lagu daabaco sawirro. Tusaale ahaan:
On mashiinada daabacaadda sawir. Meelaha waawayn ayay ku suuro galiyeen mashiinada qaarkood, iyaga oo dhigaya kaarka SD-ka, waxaad ku daabacan kartaa sawirada aad rabto daqiiqado gudahood.
Dukaammada sawir qaadista. Waxay sidoo kale leeyihiin mashiinadan, ama kuwa kale oo xirfadleyaal ah, si ay u daabacaan sawirrada.
Iyadoo loo marayo bogagga internetka. Haa, daabacaadda sawirrada internetka waa la samayn karaa. Xaqiiqdii howshu way fududahay: soo rar sawirada aad rabto inaad daabacdo, bixi oo maalmo yar gudahood ayaad guriga ku haysataa.
Dukaammada koobiga. Rumayso ama ha rumaysan, dukaamada nuqul, taasi waa, dukaamada aad dukumintiyada ku daabacdo, waxay sidoo kale lahaan karaan ikhtiyaarka ah inay ku qaadaan sawirrada aad rabto, oo ay ku jiraan warqad sawir tayo leh.
Marka haddii aad hayso sawirro aad daabacato oo aadan aqoon sida loo sameeyo, halkan waxaa ku yaal fikrado aad ku samayn karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Soo qaad daqiiqadaha ugu fiican oo ku qaabee sawirradaada daabacan